‘आफन्त बितेको बहाना गर्दै गाडी चलाउन खोज्छन्’
प्रणामीजे. जंग कार्की, ट्राफिक प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, गट्ठाघर। तस्बिर : अन्नपूर्ण सम्पूर्ण
सडकमा लकडाउनको प्रभाव कस्तो छ ?
अत्यावश्यकीय सवारी साधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारी चलेका छैनन्।
पहिले गाडीको पछि लाग्नुपथ्र्यो। अहिले मान्छेको पछि लाग्नुपर्दा कस्तो लाग्दै छ ?
कोरोना भाइरसएक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा विभिन्न माध्यमबाट सर्छ। नसरोस् भन्नका लागि सोसल डिस्ट्यान्सिङ कायम गर्नु अतिआवश्यक छ। तर, मान्छेहरूको चोकमा निस्किने गफगाफ गर्ने बानी हुन्छ। हामीले उनीहरूलाई नै रोग नसरोस् भन्नका लागि बाहिर निस्किएकालाई कारबाही गर्न थालेका हौँ।
तपाईंहरू सडकमा खटिएर काम गर्नुहुन्छ। मान्छेहरूको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ। कतै मलाई नै संक्रमण हुने त होइन भन्ने डर कत्तिको लाग्छ?
पहिलो कुरा त नेपाल सरकार र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाबाट दिएको सुझावअनुसार हामी डिस्ट्यान्स मेन्टेन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कता–कता डर त लाग्छ। तर, देश र जनताको सुरक्षाहाम्रो जिम्मेवारी हो। जागिर खाँदा नै प्रणगरेका हुन्छौँ: पहिला देश, त्यसपछि हामी।
यसरी जोखिम लिएर काम गर्दा घरपरिवारले के भन्नुहुन्छ ?
देशको अवस्था सबैले बुझेका छन्। यो समयमा मात्र नभएर अन्य समयमा पनि देशलाई आवश्यक पर्दा हामी चौबीसै घण्टा खट्छौँ। हाम्रो परिवारले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेको छ।
संकटको बेला काम गर्न केले प्रेरणा दिन्छ ?
समय–समयमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायत उपल्लो निकायका सरहरूले हामीलाई हौसला प्रदान गरिरहनुहुन्छ।
राति–राति मान्छेहरू सवारी चलाएर हिँड्छन् भन्ने सुनिन्छ नि ?
कतिपय मान्छे विभिन्न समस्या परेर आएका हुन्छन्। उनीहरूको समस्या बुझेर जान दिन्छौँ। तर, बहाना गर्नेलाई जताबाट आएको हो, उतै फर्काइदिन्छौँ। लकडाउनमा गाँउघरमा जानु त लकडाउनको उद्देश्यविपरीत भयो नि। त्यसैले फर्काउने गरेका छौँ।
लकडाउनको बेलामा सवारी चालकले कस्ता–कस्ता बहाना बनाउँदा रहेछन् ?
तत्काल जानलाई सजिलो हुन्छ र पुलिसको आँखा छल्नसकिन्छ भनेर धेरैजसोले आफन्त बितेको बहाना बनाउँछन्। त्यस्तो बेलामा हामीलाई निकै अप्ठ्यारो पर्छ। जान नदिँऊ भने वास्तवमै मान्छे मरेको हुन पनि सक्छ। दिँऊ भने बहाना बनाएका पनि हुन सक्छन्। तर, हामीलाई झुक्याउन सजिलो छैन।
अहिले दैनिक कति चालक कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् ?
२५देखि ३० जनासम्म।
उनीहरूलाई के कारबाही हुन्छ ?
तत्कालका लागि हामी उनीहरूको सवारी साधन लिन्छौँ। तर, हामी कसैको गाडी छुँदैनौँ। चाबी पनि लिँदैनौँ। एक ठाँउमा पार्किङ गर्न लगाउँछौँ। चालकलाई सिभिल पुलिसको जिम्मा लगाउँछौँ। पुलिसले उनीहरूलाई ब्रिफिङ गर्छ। बेलुका ६ बजे महाशाखाबाट आदेशआएपछि सवारी साधन उनीहरूलाई बुझाउँछौँ।